Taratasim-pifandraisan’ny Mpandikateny: Andro Iraisam-pirenena Ho An’ny Fandikanteny, Harry Potter & maro hafa koa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2019 8:28 GMT
Mirary Alatsinainy finaritra ho an'ny rehetra!
Antenaiko fa mahafinaritra avokoa ny fanombohan'ny herinandronareo tsirairay! Manana zavatra lehibe hozaraina aminareo izahay androany, ka andao ary eh! –
Andro Iraisam-pirenena Ho an'ny Fandikanteny!
Pikasary nalaina avy tao amin'ny www.proz.com
Mampiantrano ny Andro Iraisam-pirenena Ho an'ny Fandikanteny amin'ny 30 Septambra 2015 ny ProZ ary maniry anao ho tonga! Haharitra roa andro izany ary ho feno hetsika mahafinaritra toy ny torohevitra ho an'ny fandikanteny matihanina ary resaka mikasika ireo milina fandikanteny. Ny ampahany tsara indrindra? MAIMAIMPOANA tanteraka izany! Tsindrio eto raha hijery mikasika ny fandaharampotoana feno ary manorata anarana eto!
Fihaonan'ny Mpandika Tenin'ny GV
Ho fampatsiahivana fotsiny, nisy fiovana vitsivitsy natao tamin'ny Fihaonana kely an'ny GV ao Amerika Latina, ny iray amin'izany dia ny hoe raha tokony ho ny Sabotsy lasa teo dia nafindra ny Alahady 4 Oktobra amin'ny 12 alina, oran'ny Tatsinanana ny resaka mikasika ny fandikanteny. Ho an'ny lisitra feno momba ireo fiovàna sy ny fandaharampotoana ankehitriny, tsindrio eto. Manantena izahay fa hanatevin-daharana anay ianareo!
Pikantsary nalaina avy tao amin'ny www.linguee.com
Namoaka fampiasa ho an'ny iPads sy ny iPhone ny Linguee, rakibolana an'aterineto malaza be (ary iray amin'ireo ampiasaiko manokana)! Raha mila mijery haingana teny iray ianao eny an-dalana, efa azo atao izany ankehitriny! Jereo ilay rindrambaiko ary trohy eto.
Harry Potter anaty fandikanteny
Efa nanontany tena hoe ahoana no hilazàna hoe “Dumbledore” amin'ny teny Italiana? Izahay koa! Trandrahan'i Anna Bradley avy ao amin'ny The Guardian ireo fanamby amin'ny fandikàna teny zavatra toy ny anaran'ireo mpilalao toa tsy afaka adika ao anatin’ity lahatsoratra ity, mitondra ny lohateny hoe, “Manolotra an'i Albus Silente: Harry Potter any anaty fandikanteny’ . Mametraka ity fanontaniana lehibe manaraka ity koa izy:
“Raha toa ka miaina ny tontolon'i Hogwarts amin'ny fomba hafa ireo mpamaky Harry potter any amin'ny firenen-kafa, mety ho mendrika ny hanehoantsika ny natioran'ny fandikanteny izay tiantsika izany. Rehefa mamaky boky amin'ny tenim-pirenena vahiny ary tia izany isika, ny asan'iza no tena ankafizintsika? Ny an'ny mpanoratra sa ny an'ny Mpandika?”
Topazo maso ka mba lazao anay ny eritreritrao!
Toy ny mahazatra, misaotra anareo rehetra amin'ny asa mafy ataonareo sy ny fahafoizan-tenanareo ho an'ny GV!
Tantaran'ny fandikàna-gazety farany